निकई वर्स्टप्पिन मामला मा पीटर आर डी वेल्स लाई पत्र खोलें: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
प्रिय पीटर आर। डी। व्रेन्स, म धेरै रुचि संग मैले मीडिया निकई वर्टस्पेन द्वारा परीक्षण को अनुसरण गरेको छ, जसमा जसको जोस ब्रेक लाई सार्वजनिक रूपमा दोषी ठहराया गएको छ। स्पष्टीकरणको लागि: म जोसे ब्रेकको न तक्षक र न कुनै बाल यौन दुर्व्यवहार वा हत्यारेको हुँ। तथापि, यो दृढता देखि देखिन्छ कि यो मामला एक मनोवैज्ञानिक अभियान (PsyOp) हो; को लागी डीएनए डेटाबेस को माध्यम ले धक्का र कानून को हटाउन को लागी जो कि डीएनए को शोध को उपयोग को प्रतिबंधित गर्दछ जसमा यो प्राप्त भयो। किन यो मामला जस्तो देखिन्छ? यो वकील Gerald Roethof को रक्षा देखि स्पष्ट छ।
म सम्भव सिर्जना गरिएको प्रमाणको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु, किनभने यो एक PsyOp हो, त्यसपछि 'हत्यारे' सधैं एक राम्रो कहानी र गहिरो प्रमाण (प्लस आवश्यक अभिनय) संग समर्थित हुन सक्छ। यो हेर्नको लागी कुनै प्रयोग छैन, किनकी तपाईंले यो प्रमाण पाउनुहुन्न। तर, रूथोको रक्षाले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि यो एक PsyOp हो। यदि यो एक PsyOp हो (र म तपाईंलाई यो देखाउनेछु) यसको मतलब यो हो कि तपाईं कानून को माध्यम ले धमकी गर्न को लागी खराब भूमिका छ कि मान्छे को लागि एक खतरा हो। यसले तपाईंको भूमिकालाई धेरै खराब कुरा बनाउँछ। तपाईं वास्तवमा एक गुप्त हुनुहुन्छ।
त्यहाँ नीदरल्याण्डमा एक कानून हो जसले बताउँछ कि डीएनए को मामला मा प्राप्त ए ए मामला मा प्रयोग नहीं हुन सक्छ। निकी वर्स्टफेन को मृत्यु पछि बीस वर्ष को मामला को समाप्त होने को खतरा छ। यो किनभने किनभने आधिकारिक रूपमा हत्या वा ह्रास मामलाको रूपमा मान्न सकिदैन, जसको कारण सीमा अवधि पेश गरियो। त्यस सन्दर्भमा तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि यो धेरै संयोग छ कि अचानक एक संदिग्ध हुन्छ, तर म त्यो क्षण एक क्षणको लागि छोड्छु।
जोस ब्रेक अचानक हराइरहेको थियो। हामी त्यो कथालाई पूर्णतया पूर्णतया कुकुर गर्नेछैनौं, किनकि यो मिडियामा पर्याप्त छ र हामी जाँच गर्न सक्दैनौं कि यो केवल कताई छैन।
चलो यसलाई छोटो पार्नुहोस्। न्यायले यो लापताको मामलामा जोस ब्रेकको डीएनए भेला गरेको छ। आइफोनको रूपमा फोन गरौं। त्यसपछि यो डीएनए प्रयोग गरी बीमा प्रयोग गरिएको थियो, निकई भर्जेप्सनको मामला हुन। यसका लागि छनौट पाठ्यक्रमका लागि (भावनात्मक) को राम्रो तरिकाले बिक्रिको लागि हो किनभने, "अन्तमा हामी निकइ वेरारपेनको हत्याको अभियोगकर्ता फेला पार्न सकेका छौं!"तर यो भावनाको भन्दा बढी केही छैन, किनभने हत्या वा हत्यारा कहिल्यै प्रदर्शन गरिएको छैन, जस्तै यौन दुर्व्यवहार हो। यद्यपि, म यस छलफलको लागि PsyOp मोनिचर घुमाउरोमा प्रलोभन गर्न चाहँदैनन्। ग्रिल्ड रोथोफले आफूलाई राम्रोसँग राम्ररी राम्रो बनाउँछ।
Roethof एक PsyOp वकील हो यस प्रमाण मा यस: यसमा प्राप्त डीएनए ए मामला मा प्रयोग गरेन डी। यो कानून हो। साधारण तथ्य यो हो कि यदि ए बी मामला बी देखि हामी एक मनोविज्ञान संग काम गर्दै छन् मा प्राप्त डीएनए को उपयोग को बिरुद्ध कुनै पनि न्यायिक प्रक्रिया मा विरोध नहीं गरेको छ।
शो हिजो, Roethof कम्प्युटर, त्यसैले समर्थन डीएनए प्रमाण आवश्यक छ कि र विचार मा आरोप बाल पोर्नोग्राफी बारेमा धेरै ठोस तर्क आधारित Jos Brech को रिलीज advocated जहाँ, चरण लागि शो भन्दा बढी केही थियो। Roethof Jos Brech अर्थात् तुरुन्त थियो र (त्यो खेल खेल्छ जो कुनै patsy हुनेछ रूपमा) जिम्मा देखि दिन 1 देखि पहिले नै प्राप्त गर्न सक्छन् स्पष्टसित यसो भन्छ जो डीएनए प्राप्त गर्ने (शक्ति अझै पनि छ जो) कानून, जोड दिंदै मामला A, बी मा प्रयोग गर्न सकिदैन कि यो कानूनी रूप देखि मामला को कमजोर गर्नेछ।
निस्सन्देह तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ: "हो, तर जोस ब्रेक दोषी छ भने, म बुझ्दछु कि सार्वजनिक अभियुक्तले अन्धाको आँखा बदलिदिन्छ"। तर हामी शायद यो प्रश्न सोध्न सक्छ कि यो पीएसओपी मामला यो कानूनी सीमा निलम्बन गर्ने हो कि? र सबैको लागि जटिलता के हुन सक्छ?
न केवल यो मामला हो, तर अघिल्लो अवस्थामा पनि अचानक जादुई शब्द डीएनए संग समाधान भएको देखिन्छ। धेरै वर्ष अनुसन्धान र विरोधाभासी घटना पछि, अचानक एक संदिग्ध छ जो बारहरू पछि डीएनए प्रमाणको आधारमा समाप्त हुन्छ। यो जादुई शब्द को स्वीकार को लागि 'एक हत्यारे' को प्रभाव देखि प्रभावित छ: डीएनए। हामी एक राष्ट्रीय डीएनए डाटाबेस को स्वीकृति को लागि यति धीरे धीरे भइ रहेको छ, किनकी हामी भावनात्मक रूप देखि महान प्रभाव को मामला संग मनोवैज्ञानिक रूप देखि खेलयो। निस्सन्देह तपाईंले पत्रुसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो, किनभने तपाईं गम्भीरतापूर्वक बोल्न सक्नुहुन्छ र तपाइँले आफ्नो दाँत राम्रोसँग ब्रश गर्न सक्नुहुन्छ।
स्वयं-निर्मित समस्या सिर्जना गर्ने खेल, मीडिया हाइपेसको माध्यमबाट प्रतिक्रिया ट्रिगर गरेर, र त्यसपछि समाधान परिचय (समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान), हानिकारक लाग्न सक्छ। तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि अन्त्यले सार्थक ठहरायो, के यो साँचो लक्ष्य अक्सर सुन सुनुवाई र मान्छे देखेर गहिरो कुरा हो। यदि सबै हत्या र दुरुपयोग अवस्थामा हुन तुरुन्तै डीएनए द्वारा हल, तर अलग समर्थन प्रमाण अझै पनि धेरै उपयोगी छ भन्ने तथ्यलाई देखि सक्छ को पाठ्यक्रम यो अद्भुत हुनेछ, हामी सायद साँच्चै कहिल्यै डीएनए गर्न हुन सक्छ के चिन्ता हामीलाई छ एक पल्ट त्यो एक राष्ट्रीय डाटाबेस मा छ।
कानुनी सीमा डीएनए प्रयोग हटाउनुहोस्
र त्यहाँ यो पीएसओपी को महत्व अचानक क्रिस्टल स्पष्ट हुन्छ! डीएनए को उपयोग को लागि सीमा को हटान शायद यस निकवी वर्स्टप्पेन - जोस ब्रेक मामला को कडा कोर हो। एक पटक प्राप्त डीएनए यसकारण निकट भविष्यमा कुनै बाधा बिना प्रयोग गर्न सकिन्छ। वकील Gerald Roethof ले यस कानून को निवारण गरेर उनको ख्याल राखेको छ। तपाईं, पीटर, तपाइँको मुख्य महत्त्वपूर्ण हतियारको रूपमा टिभी र ट्विटरको साथ PsyOp emo-building master को भूमिका खेल्न। तपाइँ मान्छेलाई खेल्नुहुन्छ र उनीहरुलाई केहि कुरा स्वीकार्य नगर्ने को लागी तयार बनाउनुहुन्छ। त्यसैले एक पटक डीएनए राष्ट्रिय डेटाबेसमा छ, सरकारले यसको साथ सबै केहि गर्न सक्छ। यद्यपि, चित्र अब उल्लिखित छ कि यो केवल निकई वर्तन्पेन जस्तै व्यवसायमा लागू हुनेछ, तर तथ्य यो हो कि सीमा पहिले नै छाडिएको छ र कुनै पनि नतिजाहरू देख्न सक्दछ।
सबैको डीएनए संग एक राष्ट्रीय डाटाबेस मा, राज्य हरेक नागरिक को एक पूर्ण आनुवंशिक प्रोफाइल को साथ राखन सक्छ। यसको अर्थ सबै आनुवंशिक विशेषताहरू विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यो अबबाट अनुमति दिइएको छ, किनकी कानूनी सीमा (यो अवस्थामा तपाईं स्पन गरिएको छ) हटाइएको छ। मान्छे सबै अन्य ठूलो डाटा संकलन सरकारको संग संयोजन मा (विचार सामाजिक मिडिया व्यवहार, रोगी रेकर्ड, राजस्व, खर्च, कर र यसको अगाडी र यति मा) तपाईं त धेरै जटिल रूपरेखा र आनुवंशिक विशेषताहरु मानव व्यवहार लिङ्क सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ यसलाई डीआईए अनुकूलन गर्न CRISPR-CAS आनुवंशिक 'फेला पार्न र प्रतिस्थापन' कार्यक्षेत्रको क्षेत्रको वर्तमान वैज्ञानिक अवस्थामा लिङ्क गर्नुहुन्छ, सम्भावित भविष्यको चित्रले व्यक्त गर्दछ जुन जैविक-संशोधन व्यक्ति हुनसक्छ।
तपाईं पत्रुस, तपाईं यो साजिश भ्रमको रूपमा खारेज गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईंलाई आफ्नो अन्तस्करण को लागी छ। व्यक्तिगत रूप मा, मलाई लाग्छ कि तपाईं यस पछि को एजेन्डा को सही मा ठेगाना हो। तपाईं यो पैसा र तपाईंको राम्रो मोटी बीएमडब्ल्यूको लागि गर्नुहुन्छ?
आय दान कानूनले सुनिश्चित गरेको छ कि शरीर कानूनी रूपमा राज्य स्वामित्वमा कानूनी रूपमा हो। तपाईं मात्र निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि मितिकामा मृत्युको हातमा हाल्ने वा राज्य रजिस्टर मार्फत दिएर। र सबै को राज्य को लागी, राज्य रखरखाव गरिन सक्छ। त्यसैले तपाईं राज्य सम्पत्ति रूपमा मानव शरीर विचार भने, र तपाईं व्यक्तिहरूको डीएनए प्रोफाइल प्रतिबद्ध, तपाईं निर्णय गर्न सक्छ (बिना अनुमति) मर्मतका। यो पनि सरकारी भवनहरू र राष्ट्रिय सडक र सबै राज्यको स्वामित्वमा पर्दछ जुन सबैसँग। टेक्निकल, तपाईले भन्न सक्नु भएको बेला जब सडक सञ्जालले निर्णय गर्दछ, राज्यले यसमाथि नयाँ डामर राख्न भनिरहेको छ। यदि एक राज्य गुणहरू विभाजनहरू देखाउन सुरु हुन्छ भने, राज्यले यसको साथ टिंकर गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, म कल्पना गर्न सक्दिन कि तपाईले ठूलो डाटा विश्लेषणको माध्यमबाट विद्रोही व्यवहारको साथ पाउनुहुनेछ। तपाईं राष्ट्रिय डेटाबेस आफ्नो डीएनए प्रोफाइल छ भने, तपाईं कानुनी रूपमा भन्ने डीएनए एक अनुकूलित टीका सिर्जना गर्न, तपाईंले यस्तो व्यक्तिगत परिमार्जन गर्न अनुमति दिने, को CRISPR कैस विधि मार्फत डीएनए मा केही परिवर्तन कि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं हो, जस्तै यो थियो, आफ्नो राज्य सम्पत्ति मा रखरखाव सञ्चालन।
त्यसैले मैले यो सबै थोपा ठूलो सन्दर्भमा यो जोस ब्रेकको मामला कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ। तपाईं र मीडिया द्वारा जगेडा भएको उपस्थिति यो हो कि यो राम्रो छ कि हामी सबैको डीएनए हो, किनकि ठूला हत्याका घटनाहरु सुस्त हुन सक्छ। तथापि, धेरै अधिक हो। किनभने Gerald Roethof मामला बी को लागि डी ए को प्रयोग मा कानून को कानुनी उल्लङ्घन को लागी विफल मामला मामला बी को लागि, टोन सेट गरिएको छ। सबैको डीएनए प्रोफाईल चाँडै मात्र राज्य सम्पत्ती हुनेछ र राज्य अब यो सूचनाको लागि प्रयोग गर्ने प्रश्नको बारेमा चिन्तित हुने छैन।
त्यसैले यदि तपाईं सोशल मिडियाबाट ठूलो डेटा र सूचनाको अन्य स्रोतहरू मार्फत सामाजिक, मनोवैज्ञानिक स्तरमा व्यक्ति प्रोफाइल गर्न सक्षम हुनुहुन्छ र तपाईले यो डीएनए डाटाबेसको साथमा यो जानकारी मिलाउनुहुन्छ, त्यसपछि यो उपयोगी हुन्छ यदि तपाइँसँग पहिले नै कानुनीकरण छ भने यो उपयोगी छ। कि तपाइँ बिना कुनै बाधा बिना यी राज्य सम्पत्तिहरू कायम राख्न सक्नुहुन्छ। यो सजिलो छ कि त्यहाँ पनि एक कानून हो जसले प्रत्येक नागरिकमा इंजेक्शन सुई राख्न सम्भव बनाउँछ; चाहे तिनीहरूले यो चाहन्छन् वा होइन। त्यसैले यो देखिन्छ कि पहेली को सबै टुक्राहरू घटाउँछ र हामी सबै मिडियाहरू अब हामी मिडिया र सोशल मिडियामा हेर्छौं परिवर्तनका लागि तयारीमा छन् जुन हाम्रो डीएनए सम्म पुग्न सक्नेछ।
यदि तपाइँ सबैको आनुवंशिक प्रोफाईल नक्शा गर्नुहुन्छ र तपाइँ खोप लाग्ने कानूनलाई स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ जुन मान्छेमा अनिवार्य टीकाकरणको लागी अनुगमन गर्दछ, तपाईले तपाइँको राज्यको सम्पत्तिमा अनुकूलित (CRISPR-CAS) परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ।
वास्तवमा, म यो शानदार विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदानको लागि धन्यवाद, पीटर आर डी देस्सेको धन्यवाद चाहन्छु! म बेस्सन्देही विवादास्पद व्यवहार विकार, जो म भन्दा पीडित भन्दा बढी केहि पनि देख्न हुनेछ, मेरो सन्तानमा दूर प्रोग्राम गरिएको छ। मलाई लाग्छ कि एक समाजले रोबोटहरू भरिएको छ जुन केवल हाँस्यो, धेरै काम गर्दछ। म एक संसारको कल्पना गर्दछु जहाँ सबै डिजाईमर बच्चाहरू पीटर आर डी देस्सिहरु डीएनएको एकदम सानो पाउँछन्, त्यसैले हामी न केवल तपाईंको प्रेमी मुस्कुरामा टिभी शो ए वा बी मा देख्न सक्छौं, तर केवल हरेक ठाउँ! म एक राज्य कल्पना को राज्य को स्वच्छ puppets देखि भरा छ, किनकी अन्तमा इतिहास सिकाउँछन् कि शक्ति बिग्रिएको छैन र यसैले हामी आफ्नो कठपुतली खेलाडीहरूमा हाम्रो डीएनए नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ।
धन्यवाद पत्रुस! र गेराल्डलाई बधाई दिनुहोस्।
केस Nicky Verstappen, अपराधी जोस ब्रेक र bushcraft दोस्त मित्र वान Padje: पीटर आर डी वेल्स को सफलता
ट्याग: dna, विशेष, जोस बी जो ब्रेक, दुरुपयोग, हत्याको आरोप, Nicky Verstappen, अंडरवियर, पीटर आर डी देम्स, मामला
13 डिसेम्बर 2018 मा 13: 50
तपाईं वकील Roerhof मा लेख सीसी गर्न सक्दैन। मेरो वेबसाइटमा जिन मेल ठेगाना मानिन्छ।
उहाँको रक्षाको बारेमा प्रश्न सोध्नुहोस्?
13 डिसेम्बर 2018 मा 13: 55
तिनीहरू यो पढ्छन् ...
13 डिसेम्बर 2018 मा 16: 23
"Figurant" संग परेशान नगर्नुहोस्!
13 डिसेम्बर 2018 मा 19: 04
समानता पत्ता लगाउन "जर्मन माडी" को मामला पछ्याउन राम्रो हुन सक्छ। यसको अतिरिक्त, सबै मिडिया ध्यान एकै अवधारणा अनुसार चाँडै अंग्रेजी माडिडीको मामला समाधान गर्न सक्षम हुनेछ।
13 डिसेम्बर 2018 मा 19: 40
मार्टिन सफा गर्नुहोस्! मलाई आश्चर्य छ कि यदि एक बहिनी यो सज्जन जेलमा, वा कम से कम एक परिवारको सदस्य हुन सक्छ। म दुर्व्यवहार छैन। तर के उहाँ अहिलेसम्म (आधिकारिक रूपमा) सजाय भएको छैन भने भ्रमण गर्ने हकदार हुनुहुन्छ?
13 डिसेम्बर 2018 मा 19: 45
यदि तपाइँ परिवार वा केहि होइन भने असम्भव देखिन्छ। उहाँ मिडियाद्वारा परीक्षणको तुलनामा अधिक दोषी हुनुहुन्न।
तर निस्सन्देह तपाई सबै भन्दा धेरै सम्भवतः एक पट्टीलाई टाढा राख्न चाहानुहुन्छ।
मलाई यो बिन्दु छैन।
14 डिसेम्बर 2018 मा 06: 54
कैदीहरूलाई भेट्नको लागि जानकारीसँग लिङ्क गर्नुहोस्
https://www.dji.nl/contact/contactmeteengedetineerde/index.aspx तिमीलाई थाहा छ त्यो कहाँ छ र उसले तपाईंलाई बोल्न चाहन्छ। त्यसैले यो वास्तवमा राम्रो लाग्दैन भने यदि उनको वकीलले यो 'राम्रो' रक्षाको सन्दर्भमा हतोत्साहित गर्दछ। कोच, खाँसी खोल्दै।
14 डिसेम्बर 2018 मा 10: 12
सबै मिडिया: यो किन्नको पछि लागी भावनात्मक छ तर यस बीचमा नेदरल्यान्ड्सको सबैभन्दा चरम प्रकारको साथ निकईको बिरुद्ध आँखा झिल्लीमा पसेको थियो। अझै पनि सम्पूर्ण कथाको सच्चाइको बाहेक)
यो असुविधा हुन सक्छ कि यस्तो कुरा 17LJ NLERS लाई टिभी शो मा पावर टिभि द्वारा ल्याइन्छ, कसरी बिरामी तिमी पहिले हुनुहुन्न। र फेरि फेरि यो कार्यक्रममा शब्द भावनाको छोरोको सम्बन्धमा ड्रप हुन्छ, तर अतः फेंक र सबै दर्शकहरूको रिटाइनमा। (सम्मोहन गर्दै भनिन्छ)
बिरोधको बारेमा आक्रोश, निकई बिरुवाको बिरोध प्रायः उल्लेख गरिएको छ कि औसत डचमेनको निचीको रेटिनामा सम्मोहन गरिएको र कहीं र सोच्न सक्दछ। कम से कम यदि तपाईं अझै यो नाजुकिक कम जमीन को लुगदी देखो।
तल लिंकमा हेर्नुहोस्। हामी यस ब्लगरको विश्लेषण मुख्यधारामा देख्न सक्दैनौं, होइन, हामी केवल शब्द अधीनता देख्दछौं, हरेक व्यक्ति जसले इम-इन्टर्नमा उनीहरूलाई स्पेनमा ल्याउन बिर्सने भए पनि उनीहरु उल्टो हुनेछन्। त्यसो भए पनि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ।
लेख तलको लिंकमा थपिएको चलचित्र क्लिप हेर्नुहोस् मिनेट 15.05: कल भावना र एकै समयमा समयका दर्शकहरूको कानमा स्वरोजिङ भाषा फैलिएको छ। (कपटीको शिखर)
र यो अखबारमा तिनीहरू तल्लो शब्दका बारेमा पागल छन्
14 डिसेम्बर 2018 मा 21: 08
मलाई यो सकारात्मक टिप्पणी थप्न दिनुहोस्
15 डिसेम्बर 2018 मा 11: 44
यस्तो एक व्यतीत हो तपाई के छ? तपाईले आफ्ना पोतीका नायकलाई के भन्नुहुन्छ वा ..
19 डिसेम्बर 2018 मा 09: 19
हामीसँग एक अनसुलझे हत्या कोस पनि छ जसलाई Wassenaar मा सुविधा को लागि आत्महत्या भनिन्छ। Anassuragh।
के प्रकृति प्रेमीहरू अझै घरबाट महिनाका लागि टाढा छन्?
त्यसपछि यो मामला पनि 20 वर्ष भित्र समाधान गर्न सकिन्छ।
8 मार्च 2019 मा 16: 25
केवल Rkethof अधिक पैसा चाहन्छ कि पढ्नुहोस्। उनले यति कडा मेहनत गर्छन् र यसको लागि धेरै छोटो भुक्तान गरे। खैर, यदि तपाइँ प्रणालीमा काम गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले तपाइँको शुल्कमा आवेदन गर्ने नियमहरूको बारेमा उजुरी गर्नुपर्दछ। त्यसो भए अँध्यारो छैन।
त्यसपछि उसले बाहिर जान्छ र केहि गर्न चाहन्छ। त्यहाँ धेरै वकीलहरू धेरै खराब छन्। म भन्दै छैन कि उहाँ धेरै खराब छ।
प्रायः वकीलहरू गर्मीका पात्र हुन्। म भन्न छैन कि उहाँ एक जम्बी वकील हुनुहुन्छ।
5 जून 2019 मा 10: 17
आज अर्को सत्र, कृपया टिप्पणी गर्नुहोस्
त्यसैले खोज अनुप्रयोग डीएनए हराइरहेको छ, अब मान्छेहरूको बारेमा छैन
56 वर्षीय संदिग्धले भाग लिन सकेनन्। तर किनभने उनको परिवारले उनलाई हराएको थियो र प्रहरीमा उनको डीएनए सामान पठाउँदै गरेको थियो, किनभने 100 प्रतिशत डीएनए म्याच आइपुग्यो। B. डीएनए केटाको लुगामा फेला पर्यो।
आफ्नो कपडात्मक मनोवृत्ति संग Roethof कि एक राम्रो वकील हुन को लागी,
यस संसारमा असल अभिनेताहरू राम्रो लेखिएको छ, तिनीहरू वास्तवमा चौंरी (टमाटर र अन्डाहरू) योग्य छन्, माथि फेरि लेख पढ्नुहोस्, तपाइँ किन थाहा छ)
« जोस ब्रेक: गर्मी को 2019 पछि "मनोचिकित्सा मुकदमा"
मार्क रुट: प्रिय डचबाट बिना सेंसर गरिएको पत्र »
कुल भ्रमण: 1.375.203
क्यामेरा2op कोरोनाभाइरस कोविड - १ and र विज्ञान: यसले कसरी तपाइँको शरीरमा प्रवेश गर्दछ र तपाइँ यसलाई कसरी स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ?
क्यामेरा2op कोरोनाभाइरस: भाइरस कहाँबाट आउँछन् र कसरी तिनीहरू गुणा र सर्छन्?
बेन op कोरोनाभाइरस: भाइरस कहाँबाट आउँछन् र कसरी तिनीहरू गुणा र सर्छन्?
मेरो दिमाग op कोरोनाभाइरस: भाइरस कहाँबाट आउँछन् र कसरी तिनीहरू गुणा र सर्छन्?